English စာ လေ.လာမယ် ၂ – Dictionary အ သုံး ပြု ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » English စာ လေ.လာမယ် ၂ – Dictionary အ သုံး ပြု ခြင်း
English စာ လေ.လာမယ် ၂ – Dictionary အ သုံး ပြု ခြင်း
Posted by Knowledge Seeker on Jul 5, 2012 in Copy/Paste |6comments
အင်္ဂလိပ်စာ လေ. လာ ရာ တွင် မှန် ကန် သော Dictionary ရွေး ချယ် အ သုံး ပြု ရန် အ ရေး ကြီး သည်။
၁၊ မြန် မာ Dictionary ထက် English To English Dictionary ကို အ သုံး ပြု ခြင်း ဖြင်. English စာ လေ. လာ မူ ကို မြန် ဆန် စေ သည ်။ စကား လုံး တစ် လုံး အဓိပ္ပာယ် သိ ရုံ သက် သက် သာ မက ရိုး ရှင်း မှန် ကန် သော English စာ ဖြင်. ရှင်း ထား သော ကြောင်. နား လည် လွယ် ပြီး ဖတ် ရူ ရင်း ပင် ရိုး ရှင်း မှန် ကန် သော English စာ တစ် ကြောင်း ကို လေ. လာ ပြီး ဖြစ် သွား သည်။
၂၊ အ ခြား Dictionary များ ထက် Oxford Advanced Learner’s Dictionary ကှိ သုံး ပါ က အ ခြေ ခံ လေ. လာ သူ အ တွက် ပို ရွေ. ထိ ရောက် စေ သည်။ ၎င်း Dictionary တစ် အုပ် ဝယ် ထား ပြီး မ နက် အိပ် ရာ ထ အိပ် ရာ ထဲ တွင် အ နည်း ဆုံး စ ကား လုံး တစ် လုံး လေ. လာ မည် ဆို လျင် များ စွာ ခ ရီး တွင် မည် ဖြစ် သည်။ မိ မိ ကိုယ် တိုင် ဤ နည်း ဖြင်. လေ. လာ ခဲ. ပါသည်။ အ ကယ် ၍ မဝယ် နိုင် ပါ က online ဖြင်. လည်း သုံး နိုင် သည်။ http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/
၃၊ Dictionary ကို ထိ ရောက် စွာ အသုံး ချ နှိုင် ရန် က) Phonetic Sound System ကို သိ ရ မည် ခ) အ ခြေ ခံ Grammer သ ဘော ကို သိ ရ မည် ဂ) န မူ နာ ဝါ ကျ များ ကို အ ပိုင် ကူ ယူ အ သုံး ချ ရ မည်
က) Phonetic Sound System
စကား လုံး များ ကို မှန် ကန် စွာ အ သံ ထွက် နိုင် ရန် သင်္ကေတများ ဖြင်. ကိုယ် စား ပြု ဖေါ် ပြ သော စနစ် ကို Phonetic Sound System ဟု ခေါ် ပြီး
ဥပမာ – See အ သံ ထွက် ကို si: ဟု ပေး ထား မည်။ s အ တွက် အ သံ ထွက် မှာ “စ” ဖြစ် ပြီး i အတွက် အ သံ ထွက် မှာ “အစ်” ဖြစ် ပြီး : အတွက် အ သံ ထွက် မှာ “အီး” ဟု အ သံ လေး ဖြစ် သည်။ ထို. ကြောင်. ၎င်း ၃ ခု ပေါင်း ၍ စ အစ် အီး – စီး ဟု ဖြစ် သည်။ အောက် တွင် ၎င်း သင်္ကေတများ အ သံ ထွက် န မူ နာ များ ပေး ထား သည်။
Dipthong များ မှာ အ သံ ၂ မျိုး ကို တစ် ချိန် ထဲ ထွက် ရ သော အ သံ ဖြစ် သည်။
အ သံ ထွက် အင်္ဂါ များ အ ကြောင်း သိ ထား လျှင် ပို ၍ ကောင်း သည်။ http://en.wikipedia.org/wiki/International_Phonetic_Alphabet တွင် လေ့ လာ နိုင် သည်။
သို့ မဟုတ် http://www.oupchina.com.hk/dict/phonetic/home.html သို့ သွား ကြည်. နိုင် သည။် သို့ မဟုတ် နား ကြပ် ဖြင့် အ သံ ထွက် ကို နား ထောင် နိူင် သည်။ အ ဓိကမှာ မိ မိ မှား နေ သော အ သံ ထွက် ကို မှန် အောင် အ ကြိမ် ကြိမ် ရွတ် ဆို လေ. ကျင့် ပြု ပြင် ရန် ဖြစ် သည်။
ဆက် ပါ မည်။
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ dictionary ကိုပဲ
ကို သုံးရင်ပိုပြီး အကျိုးရှိတယ်ဆိုတာ
စပီကင်က လေ့လာပြီးရင်.. သင်ပြီးရင်
ဖောရိန်းမ တစ်ပွေလောက်နဲ့ ကျင့်ရမယ်… speaking
ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ်နော် .. ကျွန်တော်လည်း လေ့လာချင်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ.. ခုတော့ Planet နဲ့သုံးနေပါတယ် .. သူက နှစ်မျိုးလုံး ရေးပေးတော့ မဆိုးပါဘူး ..
ကျွန်တော် သင်ယူလေ့လာချင်ပါတယ် ..
chityinhtoo374@gmail.com ပါခင်ဗျာ ..
english to english dictionary သုံးခြင်းကအတကယ်အကျိုးရှိစေပါတယ်
seeker ရေ အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ် နော်။ dictionary ရှာနေတာ ကြာပြီ။ အခုလိုပြောပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။